လိုင်းပေါ်မှာ ဖင်တစ်ပြပြနဲ့ မော်ဒယ်တွေ ဘာလို့ဒီဟာပဲနေ့တိုင်းပြနေလဲပေါ့ - Cele Platform
အရင်က Online မှာ ဖင်တပြပြနဲ့ ဓာတ်ပုံတင်တဲ့ မော်ဒယ်ယောင်ယောင်တွေ မော်မဒယ် တဒယ် တွေ တွေ့ရင် အံသြမိတယ် ၊
ဒီမိန်းမတွေ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဒီဖင်ကြီးပဲ ဘာလို့ ပြပြနေလည်းပေါ့ ၊😕
တစ်ခါတလေ ဆို ဖင်အတုလား အစစ်လား အငြင်းပွားမှုတွေလည်း နေ့တဓူဝ ဖြစ်ကြ ၊ အစစ်ပါဆိုပြီးလှန်ပြကြနဲ့ အို… ကြည့်ရတာ ဖင်ကြီးကို တစ်ကမ္ဘာတည်ထားသလိုပဲ 😶
နောက်ပိုင်းတော့ ကိုယ်လည်း သဘောပေါက်လာတာတစ်ခုက
လူတွေဟာ သူတို့မှာ ရှိတာလေးဆို ထုတ်ပြတတ်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ 😁
ဥပမာပေါ့ စာပေဗဟုသုတ ရှိတဲ့ သူတွေဆို ၊ သူတို့မှာရှိတဲ့ ဒီဗဟုသုတလေးကိုထုတ်ထုတ်ပြတယ် ၊စာတွေရေး ၊ ဆောင်းပါးတွေရေး နဲ့ပေါ့ 😊
ဒီလိုပဲ ငွေကြေးရှိသူများကြတော့လည်း ပစ္စည်းကောင်းတွေ သုံးပြတယ် နေရာအပျံစားတွေမှာ ဆယ်ဖီလ် အပျံစားတွေ နဲ့ ပြကြတယ် ။ သူတို့ရှိတဲ့ ငွေကို သွယ်ဝိုက်နည်းနဲ့ ပြကြတာပေါ့ ၊ တစ်ချို့ဆို ငွေထုပ်ကြီး ဒဲ့ တင်တာပေါ့ 😂
ဟော ငွေမရှိသူကြပြန်တော့လည်း ၊ သူတို့မှာ ရိုးဂုဏ်နဲ့ ပရဟိတစိတ်တော့ ရှိသဟဲ့ဆိုပြီး သွေးလှူတာတွေ တင် ၊ ပရဟိတလုပ်တာတွေပြ ၊ အလှူတွေခံပေါ 😢
တစ်ချို့ကြတော့ ဝိတ်တွေမ ဗလကြီးတွေ ညှစ်ညှစ်ပြနဲ့ မှန် ဆယ်ဖီလ်တွေနဲ့ ပြရတာအမော😂
ဒီနေရာမှာ စာပေဗဟုသုတကလည်းမရှိ ၊ ငွေကြေးကြတော့လည်း လောက်လောက်လားလား ပြစရာမရှိ
ပရဟိတလည်း စိတ်မဝင်စား နဲ့ ဘာပြရမှန်းမသိ တစ်ခုခုကလည်း ပြချင်တဲ့အခါ ၊ သူတို့မှာ ကြီးနေတဲ့ ဖင်တစ်ခုထဲပြစရာရှိတော့ ဒီဖင်ပဲ ပြပြ ပြီး ဖင်ဂုဏ်မောက်နေကြရောပေါ့ 😁
ဒီနေရာမှာ အံဖွယ်တစ်ခုက ဒီဖင်ပြတာနဲ့များ နာမည်ဟာ ဖင်လောက်ကြီးလာပြီဆိုရင်… တရုတ်သိုင်းစာအုပ်တွေထဲကလို မည်သို့မည်ပုံ လုပ်လိုက်သည် မသိ ဆိုသလို…. 😜
အပေါ်က မရှိခဲ့တဲ့ ငွေကြေးဟာလည်း အလိုလိုရှိလာပြီး နေရာအပျံစားတွေဘာတွေ သွားလာနိုင်လာတယ် ၊ အံမယ်ပရဟိတတွေ ဘာတွေဆိုလည်း ပါလာပြီလေ မြန်မာဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီး ဖင်ပြဖို့အခွင့်အရေးကလည်း ဒီပရဟိတနဲ့ အလှူတွေမှာ ရောပြရသေးတာကို…..😆
အရင်ကခြေတောင် မလှမ်းဘူးတဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ Gym တွေလည်း သွားပြီး ဖင်ဆယ်ဖီလ်တွေ ရိုက်နိုင်လာတော့တာပဲ 😏
ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲ ဖွံ့ဖြိုးမှု့က ဦးနှောက်အစား ဖင်ကိုအသားပေးသွားတော့ ဖင်အားကိုးနဲ့ ရှိလာတဲ့ အထဲမှာ စာပေဗဟုသုတနဲ့ ဥာဏ်ပညာတော့ ပါလားဘူးဗျ…..😇
ဒါကတော့ ဖင်ဋီကာ ရဲ့ ချွင်းချက်တစ်ခုလို ဆိုရမှာပဲ…..😂
ဒါပေမဲ့လည်းလေ ခေတ်ကိုက စာရှည်ရင်မဖတ်ဘူး အရုပ်ရွေးကြည့်မယ် ဆိုတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ ဖင်ကြီးတွေက ပန်းပန်လျှက်ပါပဲ……
crd wa than AunG photo Credit
အရငျက Online မှာ ဖငျတပွပွနဲ့ ဓာတျပုံတငျတဲ့ မျောဒယျယောငျယောငျတှေ မျောမဒယျ တဒယျ တှေ တှရေ့ငျ အံသွမိတယျ ၊
ဒီမိနျးမတှေ နစေ့ဉျရကျဆကျ ဒီဖငျကွီးပဲ ဘာလို့ ပွပွနလေညျးပေါ့ ၊😕
တဈခါတလေ ဆို ဖငျအတုလား အစဈလား အငွငျးပှားမှုတှလေညျး နတေ့ဓူဝ ဖွဈကွ ၊ အစဈပါဆိုပွီးလှနျပွကွနဲ့ အို… ကွညျ့ရတာ ဖငျကွီးကို တဈကမ်ဘာတညျထားသလိုပဲ 😶
နောကျပိုငျးတော့ ကိုယျလညျး သဘောပေါကျလာတာတဈခုက
လူတှဟော သူတို့မှာ ရှိတာလေးဆို ထုတျပွတတျလရှေိ့တယျဆိုတာပါပဲ 😁
ဥပမာပေါ့ စာပဗေဟုသုတ ရှိတဲ့ သူတှဆေို ၊ သူတို့မှာရှိတဲ့ ဒီဗဟုသုတလေးကိုထုတျထုတျပွတယျ ၊စာတှရေေး ၊ ဆောငျးပါးတှရေေး နဲ့ပေါ့ 😊
ဒီလိုပဲ ငှကွေေးရှိသူမြားကွတော့လညျး ပစ်စညျးကောငျးတှေ သုံးပွတယျ နရောအပြံစားတှမှော ဆယျဖီလျ အပြံစားတှေ နဲ့ ပွကွတယျ ။ သူတို့ရှိတဲ့ ငှကေို သှယျဝိုကျနညျးနဲ့ ပွကွတာပေါ့ ၊ တဈခြို့ဆို ငှထေုပျကွီး ဒဲ့ တငျတာပေါ့ 😂
ဟော ငှမေရှိသူကွပွနျတော့လညျး ၊ သူတို့မှာ ရိုးဂုဏျနဲ့ ပရဟိတစိတျတော့ ရှိသဟဲ့ဆိုပွီး သှေးလှူတာတှေ တငျ ၊ ပရဟိတလုပျတာတှပွေ ၊ အလှူတှခေံပေါ 😢
တဈခြို့ကွတော့ ဝိတျတှမေ ဗလကွီးတှေ ညှဈညှဈပွနဲ့ မှနျ ဆယျဖီလျတှနေဲ့ ပွရတာအမော😂
ဒီနရောမှာ စာပဗေဟုသုတကလညျးမရှိ ၊ ငှကွေေးကွတော့လညျး လောကျလောကျလားလား ပွစရာမရှိ
ပရဟိတလညျး စိတျမဝငျစား နဲ့ ဘာပွရမှနျးမသိ တဈခုခုကလညျး ပွခငျြတဲ့အခါ ၊ သူတို့မှာ ကွီးနတေဲ့ ဖငျတဈခုထဲပွစရာရှိတော့ ဒီဖငျပဲ ပွပွ ပွီး ဖငျဂုဏျမောကျနကွေရောပေါ့ 😁
ဒီနရောမှာ အံဖှယျတဈခုက ဒီဖငျပွတာနဲ့မြား နာမညျဟာ ဖငျလောကျကွီးလာပွီဆိုရငျ… တရုတျသိုငျးစာအုပျတှထေဲကလို မညျသို့မညျပုံ လုပျလိုကျသညျ မသိ ဆိုသလို…. 😜
အပျေါက မရှိခဲ့တဲ့ ငှကွေေးဟာလညျး အလိုလိုရှိလာပွီး နရောအပြံစားတှဘောတှေ သှားလာနိုငျလာတယျ ၊ အံမယျပရဟိတတှေ ဘာတှဆေိုလညျး ပါလာပွီလေ မွနျမာဝတျစုံလေးဝတျပွီး ဖငျပွဖို့အခှငျ့အရေးကလညျး ဒီပရဟိတနဲ့ အလှူတှမှော ရောပွရသေးတာကို…..😆
အရငျကခွတေောငျ မလှမျးဘူးတဲ့ ဒိတျဒိတျကြဲ Gym တှလေညျး သှားပွီး ဖငျဆယျဖီလျတှေ ရိုကျနိုငျလာတော့တာပဲ 😏
ဒါပမေဲ့တဈခုပဲ ဖှံ့ဖွိုးမှု့က ဦးနှောကျအစား ဖငျကိုအသားပေးသှားတော့ ဖငျအားကိုးနဲ့ ရှိလာတဲ့ အထဲမှာ စာပဗေဟုသုတနဲ့ ဉာဏျပညာတော့ ပါလားဘူးဗြ…..😇
ဒါကတော့ ဖငျဋီကာ ရဲ့ ခြှငျးခကျြတဈခုလို ဆိုရမှာပဲ…..😂
ဒါပမေဲ့လညျးလေ ခတျေကိုက စာရှညျရငျမဖတျဘူး အရုပျရှေးကွညျ့မယျ ဆိုတဲ့ခတျေဆိုတော့ ဖငျကွီးတှကေ ပနျးပနျလြှကျပါပဲ……
တောင်ကြီး နည်းပညာ တက္ကသိုလ်က ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ တီထွင်ထားတဲ့ နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံး ကား 😱